Halkee ayaa loo adeegsadaa meelihii kubbadda cagta ee jeexdin?
Wareegyada kubbadda hoose ee jeexdin ayaa ah nooca ugu caansan ee meerisyada rogista. Xirmooyinka kubbada jeexdin ee aasaasiga ah waxay ka kooban tahay giraan banaanka ah, giraan gudaha ah, xirmooyin kubbado bir ah iyo xirmo baqashada ah Waxaa jira laba nooc oo saa'idka kubbada jeexdin oo qoto dheer, hal saf iyo laba saf oo isku xigta. Qaab dhismeedka kubbada jeexdin ee qoto dheer ...
Waa maxay farqiga u dhexeeya dhalista xiriirka angular iyo kubbadda jeexdin ee qoto dheer qaabdhismeedka iyo codsiga?
Xaraashka kubbadda jeexdin ee gunta dheer iyo iskuxidhka kubbadda xagalka leh ayaa ah mashiinno rogrogmaya oo wakiil ah. Iyada oo awood u leh qaadista culeyska shucaaca iyo xarkaha xarkaha labada dhinac, Waxay si ballaaran loogu adeegsadaa codsiyo badan. Waxay ku habboon yihiin xaaladaha wareegga xawaaraha sare iyo sawaxanka iyo gariirka. Khatimidii ...